हिलटेक साओल हार्ट सेण्टरमा मुटुको उपचारका साथै परामर्श सेवा | गृहपृष्ठ
Home लगानी हिलटेक साओल हार्ट सेण्टरमा मुटुको उपचारका साथै परामर्श सेवा
हिलटेक साओल हार्ट सेण्टरमा मुटुको उपचारका साथै परामर्श सेवा
पुस ४, काठमाडौं । काठमाडौंको शेर्पा मलस्थित हिलटेक साओल हार्ट सेण्टर प्रालिले मुटुसम्बन्धी विभिन्न किसिमका रोगका उपचार तथा परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । ६ महीना अघिबाट सञ्चालनमा आएको सेण्टरले अमेरिकाबाट आयात गरिएको आईपीसी मेशिनको प्रयोगले मुटु र यससम्बन्धी विभिन्न रोगको विनाअपरेशन उपचार गर्ने गरिएको सञ्चालक कमल जैनले बताए ।
आईपीसी मेशिनले शरीरमा निष्क्रिय रहेका नशालाई सक्रिय बनाई सम्भावित हृदयघातबाट जोगाउँछ । त्यस्त,ै यसल े बाइर्प ास सजर्र ी, एञ्जिआप्े लाष्टि गनर्पु र्न े अवस्थाबाट समेत बचाउने उनले बताए । साथै, केन्द्रले मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोगबाट बच्नका लागि व्यक्तिले अपनाउनपु र्न े जीवनशलै ी, स्वास्थ्यकर भाजे न तथा शारीरिक व्यायामका बारेमा उचित परामर्श तथा तालीम पनि दिने गरेको छ । यसअन्तर्गत केन्द्रले साँगामा रहेको कैलाश आरोग्य धाममा हरेक दुई महीनामा शिविर सञ्चालन गर्न े गरके ा े छ ।
यस वर्ष फागनु ६ र ७ गते उक्त शिविर सञ्चालन गरिने जैनले जानकारी दिए । उक्त क्याम्पमा विगत १४ वर्षदेखि भारतमा साओल हर्ट पा्रगे ाम सञ्चालन गर्द ै आएका डा. विमल छाजडे ले मुटुरोगबाट बच्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर भोजन तयारी र उचित शारीरिक व्यायामका विषयमा प्रवचन तथा तालीम दिनेछन् ।
साओल (साइन्स एण्ड आर्ट अफ लिभिङ) एक प्रकारको स्वास्थ्य उपचार पद्धति हो । अल इण्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा १५ वर्षसम्मको अनुसन्धानपछि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो । यसले १४ वर्षको अवधिमा भारतका १५ हजारभन्दा बढी मुटुसम्बन्धी समस्या भएकालाई ‘नेचुरल बाइपास’ र ‘बायोकेमिकल एजियोप्लाष्ट’ सेवा प्रदान गरेको जैनले जानकारी दिए । हाल यसको भारतमा १० शाखा छन् ।
हिलटेक साओलले स्थापनादेखि हालसम्म करीब २० जना मुटु रोगीलाई यस्तो सेवा प्रदान गरिसकेको जैनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार साओल पद्धतिबाट सेवा लिनका लागि मुटु रोगी ३५ दिनको प्याकेजामा सहभागी हुनुपर्छ, जसमा आईपीसी मेशिनबाट उपचार गरिनुका साथै आरोग्य धाममा सञ्चालन हुने प्राकृतिक उपचार तथा प्रशिक्षणमा सहभागी गराइन्छ । यो सम्पूर्ण प्याकेजका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने जैनले जानकारी दिए । अहिले एउटा प्याकेजमा ५ देखि ७ जनालाई सहभागी गराउने गरेको बताए । आईपीसी मेशिनमा रू. ५० लाखको लगानी गरेको हिलटेक साओलका सञ्चालक कमल जैनले बताए ।